Iphoyisa “elinesibindi” lidubule kuqala umsolwa laze lazomgada esibhedlela | Scrolla Izindaba
Enye yala madoda yamkhomba ngesibhamu yathi akaphakamise izandla.
Kodwa okungazange kubhekwe yizigebengu ukuthi uMatome, ozinze esiteshini samaphoyisa e-Tembisa Rabasotho, ubesephoyisa iminyaka eyi-17.
Leli phoyisa elihlakaniphile lehlise umoya, lakhipha isibhamu salo ladubula le ndoda ehlomile ethangeni.
“Ngidubule lo wesilisa ngesibhamu. Abanye babo ababili babukeke bengenazo izikhali,” kusho uMatome, oqapha iziboshwa nabasolwa abangeniswe esibhedlela.
Le enye yamadoda ebaleke endaweni yesehlakalo – kanti njengamanje uMatome ugada yena lo msolwa esibhedlela sase-Tembisa kuwadi ye-19.
“Ngisebenze kule ndawo izinyanga eziyisikhombisa lapho ngigada khona abasolwa ngobugebengu. Abanye bayizigebengu ezibandakanyeka ekudutshulweni kanti abanye bayagula nje,” kusho uMatome.
“Bonke bayiswa kule wadi egadwe ngamaphoyisa futhi ngingomunye wamaphoyisa agadayo.”
UMatome uthe lesi sehlakalo simhlukumeze kakhulu futhi usefune usizo lochwepheshe.
UMatome ushayelwe ihlombe ngamalungu omphakathi abelokhu elwa nezigebengu endaweni.
Ilungu lomphakathi uMlungsi Ncube uthe uzwe kuqhuma isibhamu ngaphandle komuzi wakhe.
“Ngesikhathi ngivula iwindi lekamelo lami lokulala ngibone owesilisa phansi kanti iphoyisa belimile eduze kwakhe limxwayisa ukuthi angabaleki,” kusho uMlungisi.
UMlungsi uthe sekuqubuke izigameko eziningi zobugebengu endaweni lapho amadoda ahlomile ephuca abantu izimpahla zabo.
“Leli phoyisa libe nesibindi sokwehlula izigebengu esikholwa ukuthi bezisabisa abantu endaweni,” kusho uMlungsi.
Okhulumela amaphoyisa uKaputeni Manyaza Ralidziba uthe baphenya amacala okuzama ukubamba inkunzi nokutholakala nezibhamu nezinhlamvu ezingekho emthethweni.